လိဂ်ဖလားက အောင်မြင်မှုများ၏ အစသာဖြစ်ကြောင်း ဒီဘရူနီ ကြုံးဝါး၊ ဖဲကြိုးဝါ ဝတ်ဆင်ခြင်းအတွက် န?? - Yangon Media Group
လိဂ်ဖလားက အောင်မြင်မှုများ၏ အစသာဖြစ်ကြောင်း ဒီဘရူနီ ကြုံးဝါး၊ ဖဲကြိုးဝါ ဝတ်ဆင်ခြင်းအတွက် န??
မန်စီးတီးနည်းပြဂွါဒီယိုလာက အာဆင်နယ်ကိုအနိုင်ယူပြီး လိဂ်ဖလားရယူနိုင်ခဲ့ခြင်းမှာ အသင်းနှင့်ထိုက်တန်သော အောင် မြင်မှုဖြစ်သည့်အပြင် နောက်ထပ် အောင်မြင်မှုများ၏အစလည်းဖြစ် ကြောင်း ပြောဆိုခဲ့သည်။ မန်စီးတီးသည် ဝင်ဘလေကွင်းတွင်ကစားခဲ့သော ဗိုလ်လုပွဲတွင် အဂူရို၊ ကွန်ပနီ၊ ဆေးလ်ဗား တို့၏သွင်းဂိုးများဖြင့် အာဆင်နယ်ကို ၃-ဝဖြင့်အနိုင်ရခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ၂ဝ၁၆တွင် မန်စီးတီးနည်းပြအဖြစ် ဂွါဒီယိုလာတာဝန်ယူခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်း ပထမဆုံးဆုဖလားကိုရယူနိုင်ခဲ့သည်။
အက်ဖ်အေဖလားတွင် ဝီဂန်ကိုရှုံးနိမ့်ကာ ပြိုင်ပွဲမှထွက်ခဲ့ရခြင်း ကြောင့် တစ်ရာသီအတွင်း ဆုဖလားလေးလုံးရယူနိုင်မည့် စံချိန်နှင့်လွဲချော်ခဲ့ရသော်လည်း ယခုကဲ့သို့ လိဂ်ဖလားကိုရယူနိုင်ခဲ့ပြီး နောက်ပရီးမီးယားလိဂ်နှင့် ချန်ပီယံလိဂ်ဆုဖလားများကို ဆက်လက်ရယူမည်ဟု ဒီဘရူနီကဆိုခဲ့ ခြင်းဖြစ်သည်။ ဒီဘရူနီက ”ဒီအောင်ပွဲက ကျွန်တော်တို့နဲ့ထိုက်တန်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အာရုံစူးစိုက်မှုကို ဒီအတိုင်းဆက်ထားသွားရမှာဖြစ်ပြီး ပရီးမီးယားလိဂ်နဲ့ချန်ပီယံလိဂ်မှာလည်း ဆက်လက်အား ထုတ်သွားဖို့လိုပါတယ်”ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။ မန်စီးတီးနောက်ခံလူ ကွန်ပနီကလည်း ယခုနှစ်ရာသီတွင် ပြိုင်ပွဲအရပ်ရပ်၌ ၁၃ပွဲသာကစားခွင့်ရခဲ့သော မိမိအတွက် ထိုက်တန် သောအောင်မြင်မှုဖြစ်ပြီး ကစားသ မားဘဝတွင် လိဂ်ဖလားကို သုံးကြိမ်မြောက်ရယူနိုင်သည့်အတွက် ကျေနပ်မိကြောင်းပြောဆိုခဲ့သည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင် မန်စီးတီးနည်းပြဂွါဒီယိုလာက ကတ်တ လန်ဒေသလွတ်လပ်ရေးကြေညာမှုကို ထောက်ခံအားပေးသည့်အ နေဖြင့် ဖဲကြိုးဝါဝတ်ဆင်ခဲ့ခြင်းအတွက် အက်ဖ်အေ၏စွဲချက်တင်မှုကိုခံခဲ့ရသော်လည်း လူတစ်ဦးအ နေဖြင့် ၎င်း၏အမြင်ကို လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြသခွင့်ရှိကြောင်း ပြောဆိုခဲ့သည်။ ဂွါဒီယိုလာက ”ကျွန်တော့်အ နေနဲ့စည်းမျဉ်းတွေကို ချိုးဖောက်မိတယ်ဆိုရင် လူသားတစ်ဦးပီပီ ဒဏ်ရိုက်ခြင်းကိုလက်ခံရမှာပါ။ လူတိုင်းဟာ အပြစ်ရှိတယ်လို့ မသတ်မှတ်သရွေ့ အပြစ်ကင်းနေကြမှာပါ။ ဗြိတိန်အနေနဲ့ အီးယူကခွဲထွက်ဖို့လုပ်တုန်းက ဆက်နေမယ်၊ မနေဘူးဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး စ ကော့တလန်သားတွေကို မဲပေးစေခဲ့လို့ ကျွန်တော့်ရဲ့ရပ်တည်မှုကိုလည်း အင်္ဂလန်သားတွေနားလည် ကြမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ ဒါဟာ နိုင်ငံရေးသမားတွေကို အား ပေးတာမဟုတ်ဘဲ ဒီမိုကရေစီနည်းလမ်းအရ ထုတ်ဖော်ပြသခြင်းသာ ဖြစ်ပါတယ်”ဟုဆိုခဲ့သည်။
ကျောင်းအပ် လက်ခံချိန်တွင် ကျူရှင်တက်ရန် ဆွဲဆောင်ခြင်းနှင့် ငွေကြေး ကောက်ခံခြင်းများ မပြုလ